Kathmandu24 || 24*7 News In Nepali Language » मलाई प्रधानमन्त्री ओलिका मान्छेले धम्की दिए : शारदा भट्ट, सांसद नेकपा
मलाई प्रधानमन्त्री ओलिका मान्छेले धम्की दिए : शारदा भट्ट, सांसद नेकपा
काठमाडौं, वैशाख १९ । म राष्ट्रिय सभाको सांसद हो, अहिले लकडाउनले गर्दा लुभुमा रहेको घरमै बसिरहेकी छु। लकडाउनमा घर बसिरहेको बेलामा केपी ग्रुपका (प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी ओली)धेरैको फोन आयो।
तर उनीहरु धेरैले केही भनेका थिएनन्, खाली हस्ताक्षर गर्न मात्रै बालुवाटार जानु पर्यो भनेका थिए। आज ४ बजेर ४ मिनेटमा नेकपा केन्द्रीय सदस्य गौरी ओलीको फोन आयो।
उनी प्रधानमन्त्री केपी ओली निकटको मान्छे हो। मलाई फोन गरेर पहिला त राम्रै कुरा गरिन्। उनले दस्तखत गर्न जानुभएन बालुवाटार? भनेर भनिन्।
पहिला त मैले मलाई सञ्चो छैन भनेकी थिएँ। मैले त्यसो भनेपछि उनले ‘गाडीमा गएर दस्ताखत गरेर आउनुपर्यो नि, प्रधानमन्त्रीलाई ढाल्दै छन्, तपाइको एउटा दस्ताखतले कत्रो ठूलो काम गर्छ’ भनेर भनिन्।
त्यसपछि मैले हेर्नुस म राष्ट्रिय सभाको सदस्य हो, मेरो त्यहाँ प्रधानमन्त्रीलाई ढाल्ने र जोगाउनेमा कुनै भूमिका हुँदैन भनेर समेत भनेकी थिएँ।
फेरी उनले सबै राष्ट्रिय सभाका सांसदले हस्ताक्षर गरेर आउनुभयो तपाइले अनेक बहाना गर्नुहुन्छ भनेर समेत भनिन्।
अनि मैले तपाईं त्यसो नभन्नुसन मैले केही बहाना गरेको छैन भनेर भनेँ। पार्टीमा सबै लडिराछन् पार्टीमा यत्रो बबाल भएको छ, म तटस्थ बस्ने मान्छे हो त्यसैले यो लफडा राम्रो मान्दिनँ भनेपछि उनी एकाएक आक्रोसमा आइन्।
आक्रोसमा आएर उनले ‘हिजो अस्ति टिकट दिने बेलामा प्रधानमन्त्रीले मलाई दिनुभएको थियो, मैले हाम्रो शारदा दिदी बुढी मान्छे, इतिहास बोकेको मान्छे उहाँलाई दिनुपर्छ भनेर भनेको हो’ भनेर उनले भनिन्।
उनको त्यस्तो कुरा सुनेपछि मैले भने ‘तपाईं आफै हुनपर्ने हो नि तपाइले मलाई किन दिनु परेको थियो र? म त ७० वर्षसम्म यसै बसेको थिएँ’ भनेर जवाफ दिएँ।
मलाई उनको कुराले चित्त नबुझेपछि मलाई त नेकपाले टिकट दियो भन्ने ठानेको थिएँ तर गौरा ओलीले दिएको रैछ भनेपछि उनले होनि त समेत भनिन्।
उनले फेरि मलाई तपाईं जानुहुन्न भनेर भनिन्। अनि मैले म कतै जान्न, यतापनि जान्न उता पनि जान्न भनेर जवाफ दिएँ।
त्यसो भए तपाईंलाई धेरै अफ्ठ्यारो पर्ला है भोलिको दिनमा गाह्रो पर्ला भनिन। अनि मैले के अब मेरो पद खोस्नुहुन्छ र तपाईं भनेर समेत भनेँ।
त्यसपछि उनले जे पनि हुनसक्छ भनेर भनिन्। ‘जे पनि हुनसक्छ बिचार गर्नुहोस, है बिचार गर्नुहोस,’ भनेर भनिन्। उनले अझै रिसाउँदै ‘राम्ररी बस्नुहोला, तपाईंलाई धेरै अफ्ठ्यारो होला भोलिको दिनमा, मैले भन्दिएको कुरा हो, धेरै सतर्क भएर बस्नुस्’ भनेर भनिन्।
अन्तिममा मैले ए त्यसो हो र भनेर भनेँ। अनि उनले किन नहुने जे पनि हुनसक्छ नेपालमा भनिन्। मैले ल त्यसो भए गर्नुस जे जे हुन्छ मलाई गर्नोस् भनेर भन्दा उनले ए त्यसो हो? भनेर ठ्याक्कै फोन राखिन्।
उनले जोडतोडले गाली समेत गरेकी थिइन्। यो धम्की होइन त ?
(राष्ट्रिय सभामा नेकपाबाट गत माघमा निर्वाचित सांसद शारदा भट्टसँग सेतोपाटी अनलाइनले गरेको कुराकानीमा आधारित)